हामीलाई डरलागेको वा गर्न नसक्ने जस्तो कुरा आफ्नो सामुन्ने आउँदा हामी नेपालीको मुखबाट फुत्कने शब्द हो, आबुई ! आबुई वा आब्बुइ वा अबुइ जे भने’पनि मैले भन्न खोज्या कुरा त बुझ्नु भो होला । म चैँ आबुई (Abui) भन्छु है । त्यही हामीभित्र रहको डर जनाउने शब्द ‘आबुई’लाई समेट्दै र हामी भित्रको शब्दको डर हटाउन ‘आबुई डटकम’ आइपुगेकोछ ।
कुनै नेपाली शब्दको अर्थ आएन वा उखान टुक्काको अर्थ बुझ्न सकिएन भने अब त्यसको समाधान प्राय आबुई डटकममा भेट्न सकिन्छ । गतसाल पुषदेखि सञ्चालनमा आएको ‘आबुई डटकम’ नै ‘अनलाइन नेपाली शब्दकोष’ (Online Nepali Dictionary) हो।
आबुई डटकममा नेपाली शब्दका अर्थका साथै नेपाली उखानहरुका अर्थ भेट्न सकिन्छ । नेपाली ब्लगका ब्लगर नेपालीले निर्माण गरेको आबुई डटकममा दैनिक रुपमा एउटा शब्दलाई “आजको शब्द” भनेर त्यसको अर्थ दिने गरिएकोछ ।
आबुई डटकम कसरी चलाउने?
आबुई डटकमको गृहपृष्ठमा टेक्स्टबक्स रहेकोछ । टेक्स्टबक्स माथि ‘शब्द कोरे कोरे जस्तो गरौँ’ भन्ने वाक्य राखिएकोछ, त्यहाँ भनिएजस्तै टेक्स्टबक्स भित्र गएर शब्द कोरे जस्तो गर्नुस अर्थात कुनै शब्द लेखेजस्तो गर्नुस्, तपाईले रोमनमा लेखेका अक्षरहरु आफैँ नेपाली शब्दमा परिवर्तन हुनेछन् वा भनौँ ‘अटो सजेस्ट’ गरिनेछन् । तपाईले खोजेको शब्द, साइटमा समावेश रहेछ भने, सजेसन (सल्लाह)मा देखाउँछ, त्यस शब्दलाई इन्टर गर्नुहोस्, तपाईले त्यसको अर्थ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ ।
हामी माझ नेपाली शब्दहरुको अभाव त छैन तर हामीमाझ अनलाइन नेपाली शब्दकोषहरुको भने अभाव छ । केही हदसम्म आबुइ डटकमले नेपाली अनलाइन शब्दकोषको अभाव हटाउन मद्दत गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । नेपाली ब्लगका अनुसार आबुइ डटकममा अहिले लगभग १ लाख २ हजार बढि नेपाली शब्दहरु रहेकाछन् । साइटमा यो वर्षको अन्त्य सम्ममा १ लाख ४० हजार शब्दहरु संग्रहित गर्ने लक्ष्य राखिएकोछ । वर्षको अन्त्य सम्ममा साइटमा सर्च फिचर पनि राख्ने योजना रहेकोछ ।
आबुई डटकमसँग नजिक रहनचाहनुहुन्छ भने ट्विटर, र फेसबुक मार्फत साइटसँग जोडिन सक्नुहुन्छ ।
आबुइ डटकम (नेपाली अनलाइन शब्दकोष)
फेसबुक: Nepali Dictionary
Naresh Tulachan February 7, 2015 at 11:19 AM
अन लाईन शब्दकोश आबुई डटकमले नेपाली साहित्य लेखन कार्यमा धेरै उपयोगिता भएको महशुस भएको छ । यस प्रति म धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
Aakar Anil February 7, 2015 at 5:04 PM